ဒေါင်းတမာန်: 09/27/2009 - 10/04/2009
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, October 03, 20090comments
Now .. Who want to use Apple products?
Are you still disagree with this image from Apple products advertising ? just Click --->follow this Apple products link
ပန်းသီး အမှတ်တဆိတ် ကုမ္ပဏီမှ ဒီဇိုင်းနာ ဂျော်န်အိုက်ဗ် က ၄င်းမျက်နှာဖြင့် ဗုဒ္ဓ ပုံတော်အား အသုံးပြုလျက် ကြော်ငြာထုတ်ဝေထားသောပုံအား ဘာသာရေးအမြင်အရ မသင့် တော်သော ကြော်ငြာအား ပန်းသီး အမှတ်တဆိတ်ပါ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား ဆန့် ကျင့် ကြပါစို့ လို့မျှဝေရင်း ။ မယုံပါက ဤနေရာသို့နှိပ်ရင်းလည်ပါတ်နိုင်ကြောင်း ပန်းသီးအမှတ်တဆိတ်
အရှေ့ ကိုလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်လိုက်ရင်
ရန်ကုန်မြို့ မှ ကြိုဆိုပါ၏။
တရားမ၀င်အစိုးရလက်အောက်တွင် ဤသို့ ဤသို့ 
Friday, 02 October 2009 18:39 ကိုထွေး
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက ငြင်းပယ်လိုက်ကြောင်း ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းအယူခံကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ စတင်ကြားနာခဲ့ပြီး ၁၁ နာရီကျော်တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“အယူခံကို ပယ်တယ်၊ ဗဟို တရားရုံးမှာ ပြင်ဆင်မှုသွင်းမယ်၊ ပြင်ဆင်မှုသွင်းဖို့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို မိတ္တူ ကူးနေတယ်၊ အမြန်ဆုံး ကျနော်တို့ လုပ်နေပါတယ်” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ရှေ့နေ ဦးကြည်ဝင်းကလည်း“ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်းမှာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်မှုကို တင်ရမယ်၊ ဟိုတုန်းကတော့ လွတ်လွတ် လပ်လပ် တရားစီရင်နိုင်တယ်၊ အခု တရားရုံးကတော့ မလွတ်လပ်ဘူးလို့ မြင်နိုင်ထင်နိုင်တယ်၊ ရှေ့နေတွေမှာ မျှော်လင့်ချက် ရှိတယ်” ဟုဆိုသည်။
အယူခံလွှာတွင် ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာ အချက် ၁၁ ချက်ပါဝင်ပြီး၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ နှင့် ဥပဒေ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ ပါဝင်သည်ဟု သိရှိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အယူခံကို ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးက စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့ တွင် လက်ခံခဲ့ပြီး လျှောက်လဲချက် ကြားနာရန် အောက်တိုဘာလ ၂ရက်နေ့တွင် ရုံးချိန်းပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြီးခဲ့သော သြဂုတ်လ ၁၁ရက်နေ့တွင် တိုင်းတရားရုံးက နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၁နှစ်ခွဲ ချမှတ်ခဲ့သည့် အပေါ် ယခုကဲ့သို့ အယူခံဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အယူခံ ကြားနာရာသို့ အာဏာပိုင်များက ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခွင့် မပြုခဲ့ပေ။
ယနေ့တွင်ပင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးရန်အတွက် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းကို အာဏာပိုင်များက ထပ်မံခွင့်ပြုလိုက်သည်ဟု ကြားသိရကြောင်း သို့သော်လည်း အတည်မပြု နိုင်သေးကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၂၀ ရက်က ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်း သွားရောက် စစ်ဆေးစဉ်ကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သည် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်လျက်ရှိသော်လည်း သွေးပေါင် အနည်းငယ် ကျနေကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မေလအတွင်း ၎င်း၏နေအိမ်သို့ တိတ်တဆိတ် ဝင်ရောက်ခဲ့သော အမေရိကန် နိုင်ငံ သား ဂျွန် ဝီလျံ ယက်ထော ကြောင့် ရုံးတင်တရားစွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုအမှုတွင် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ သည်။ သို့သော် စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အမိန့်ဖြင့် ကျခံရမည့် ထောင်ဒဏ်ကို ထက်ဝက် လျှော့ချကာ ဆိုင်းငံ့ ပြစ်ဒဏ် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲ စီရင်ချက် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီး ဖြစ်၍ လည်းကောင်း၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ရှေးရှု၍ လည်းကောင်း၊ အာဃာတ မရှိစေရေး အတွက် လည်းကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းတွင် အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရေးအတွက်လည်းကောင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်းအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အပြီးမှ စတင်၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ၆ နှစ်ပြည့်ခါနီး အချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ တရားစွဲဆို ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် နေရချိန် စုစုပေါင်း ၁၃ နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ် သည်။
၀ အကြောင်း တစေ့တစောင်း
ဘီဘီစီ မေးမြန်းသည့် အတိုင်းမဟုတ်မှန်ဟု ၀ အရာရှိများဆို
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ 30 စက်တင်ဘာလ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
တရုတ်နယ်စပ် အခြေစိုက် ၀ နှင့် မိုင်းလား တပ်ဖွဲ့တို့မှ စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကို သဘောတူလိုက်ပြီဟူ၍ မြောက်ပိုင်းအပစ်ရပ် SSA အသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် မေးမြန်းစဉ်သိရှိခဲ့ရသည်ဆိုသော သတင်းမှာ လုံးဝ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ပန်ဆန်းဌာနချုပ်ရှိ ၀ အရာရှိတဦးက ပြောဆိုပါသည်။
“ဘီဘီစီမေးတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ နောက်လာမယ့်အစိုးရသစ်နဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးပြီးမှသာအသွင်ပြောင်းရင်ပြောင်း မယ်။ အခုတော့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး” - ဟု ပြောပါသည်။
ယခုလနောက်ဆုံးပတ်က မြောက်ပိုင်း အပစ်ရပ် SSA ခေါင်းဆောင်အချို့ လားရှိုး ရမခ စစ်တိုင်းရုံးသို့ ရောက်ရှိနေချိန် ၀ တပ်ဖွဲ့ နှင့် မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ တို့ စစ်အစိုးရ၏ ဆန္ဒအတိုင်း သဘောတူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“စစ်အစိုးရက ကျနော်တို့ကို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေ ခေါ်ယူစည်းရုံးတာတွေမလုပ်တာကြာပြီ၊ မိုင်းလားတို့၊ ကချင် တို့ သျှမ်းတပ်တို့နဲ့ဘဲတွေ့တာ၊ ကျနော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ သူတို့စာရင်းထဲက တမင်သက်သက် ထုတ်ပစ်တာပါ၊ သူတို့ ဆန္ဒအတိုင်း လိုက်လျောဖို့လဲ မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး” - ဟု ထိုအရာရှိက ပြောပါသည်။
ယခုလ ၂၇-၂၈/၉/၀၉ တရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ် နှင့် နအဖ ကိုယ်စားလှယ်တို့ ၀ ဌာနချုပ် ပန်ဆန်း၌တွေ့ဆုံဆွေး နွေး ဖို့ အစီအစဉ်ရှိသဖြင့် တရုတ်အာဏာပိုင်များကပန်ဆန်းဌာနချုပ်အရာရှိများအားကြို တင်စီစဉ်ထားပေး ရန်အ ကြောင်း ကြားကြောင်း၊ သို့သော် စစ်အစိုးရဖက်က ပန်ဆန်း၌ တွေ့ဆုံရန် လက်မခံ သောကြောင့်တရုတ်ကိုယ်စား လှယ်အား ပန်ဆန်းမှ တန့်ယန်းသို့ လာကြိုသွားခဲ့ကြောင်း - ပြောပါသည်။
“အခု ဒေသတွင်း နအဖ နဲ့ တရုတ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ တရုတ်ဘက်က ၉ ယောက်လာတယ်။ တန့်ယန်းက နအဖ စစ်ဗျူဟာမှူးလာကြိုသွားတယ်။ အရင်တုန်းက တရုတ်တွေ စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပန်ဆန်းမှာဘဲတွေ့တာ၊ ကျနော်တို့ ဘက်က နေရာထိုင်ခင်း နဲ့ အစည်းဝေးနေရာအတွက် ပြင်ဆင်ပေးတာကလွဲလို့ ဘာမှသွားမပတ်သက်ဘူး။ အခု ကျနော်တို့ အားလုံးပြင်ဆင် ထားပေမယ့် နအဖက ကျနော်တို့ ဌာနချုပ်မှာ မတွေ့လိုဘူး။ အဲဒီအရင်ကနဲ့ ထူးခြားမှုလို့ဆိုရမှာပေါ့” - ဟု ထိုအရာရှိက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ဆက်ပြော၏။
ဖုန်ကြားရှင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ကဲ့သို့ ၀ ခေါင်းဆောင်များလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေး အစီအစဉ်အား ခေါင်းခါငြင်းဆန်ထားသောကြောင့် ကိုးကန့်နည်းတူ ၀ တပ်ဖွဲ့အား စစ်အစိုးရ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာ မည်ကို စိုးရိမ်နေသည်မှာ ကိုးကန့်အရေးအခင်းပြီးနောက်ပိုင်း ယနေ့အထိ ပြည်သူများ ရတက်မအေး ဖြစ်နေရကြောင်း သိရပါသည်။
ဖြိုးဝေ-mmp | ယနေ့ သီတင်းကျွတ်လပြည့် (၁၅) ရက် (၃.၁၀.၂၀၀၉) စနေနေ့ သံဃာပ၀ါရဏာပွဲနေ့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သံဃာတော်များနှင့်တကွ ပြည်ပနိုင်ငံ အသီးသီးရှိ သံဃာတော်များအားလုံး ပူးပေါင်း၍ စစ်အာဏာရှင်များအပေါ် သပိတ်မှောက်သည့် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ပွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
သံဃာတော်အဖွဲ့အစည်းများ၏ သြဂုတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ကြေငြာချက်များအရ မတရားဖမ်းဆီးထားသော သံဃာတော်များအား ချက်ချင်းလွတ်ပေးရန်နှင့် သံဃာတော်များအပေါ် နှိပ်စက်သတ်ဖြတ် စော်ကားမှုများကို အမြန်ဆုံးပြန် လည်တောင်းပန်ရန် ဖြစ်သည်။ ၄င်း ၂ ချက်အား သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၄ရက် (၂.၁၀.၂၀၀၉) သောကြာနေ့ နေ့လည် ၁၂ နာရီအချိန်အထိ စစ်အာဏာရှင်များအနေနဲ့ ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ထို့ကြောင့် ကြေငြာချက်ပါအတိုင်း ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အသီးသီးမှ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင်ပွဲ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သံဃာလှုပ်ရှားမှုအတွက် ပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာမည့်သူများကို အထူးသတိထားရန်နှင့် လှုပ်ရှားသူအတုများက ၄င်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် ထောင်ခြောက်ဆင်ကာ သံဃာ ၁၅၀ ခန့်ကို စုဆောင်းထားပြီး စောင့်နေကြကြောင်း အရှင်ဦးထာဝရမှ သတိပေးမိန့်တော်မူသည်။
တတိယအကြိမ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကို အချိန်အခါကြည့်၍ လမ်းပေါ်ထွက်ကာ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ တတိယအကြိမ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွင် မိဘပြည်သူများဘက်မှ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကဲ့သို့ သံဃာတော်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် အားပေးကူညီမှုများ လိုအပ်ပါကြောင်း ဆရာတော်မှ တိုက်တွန်းမိန့်ကြားသွားသည်။
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတွင် အပြစ်မဲ့သော သံဃာတော်များနှင့် မိဘပြည်သူများ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်း၊ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရခြင်းများအပေါ် မဟာန ဆရာတော်ဘုရားကြီးများမှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမှုများ မပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အောင်မြင်မှုများ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း၊ ယခု တတိယအကြိမ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲတွင် မဟာန ဆရာတော် ဘုရားကြီးများမှ ဝင်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန် ရိုသေစွာဖြင့် လျှောက်ထားအပ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း သံဃာတော်များနှင့်အတူ တစ်သားတည်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက်များအရ သိရပါသည်။ သံဃာတော်များ၊ မိဘပြည်သူများ နှင့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ တညီအညွှတ်တည်းပေါင်းစည်းကာ စစ်အာဏာရှင်များအပေါ် တတိယအကြိမ် အဆုံးသတ်တိုက်ပွဲကို ဆင်နွဲပါက အောင်မြင်မှုရရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။
အရှေ့ ကိုလျှောက်ပါလို့အနောက်ကိုတဲ့ မျှော်လိုက်ရင...